काठमाडौँ जिल्लामा उत्साहपूर्वक उम्मेदवारी दर्ता, महानगरमा को-को छन् ? « Deshko News
काठमाडौँ जिल्लामा उत्साहपूर्वक उम्मेदवारी दर्ता, महानगरमा को-को छन् ?
यही वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुलुकको राजधानी काठमाडौँ जिल्लामा विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले उत्साहपूर्वक उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
झन्डै दुई दशकपछि हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले उत्साहपूर्वक उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
काठमाडौँमा जिल्लामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य गरी निर्वाचन हुने जम्मा ७१२ पदमा विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र गरी हजारौको उम्मेदवारी परेको छ ।
निर्वाचनका लागि काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी ४७ दल दर्ता भएकाले अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँ बढी उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । जिल्लाका सबै तहमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएका छन् ।
नेकपा (एमाले) ले काठमाडौँ महानगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग तालमेल गरेको छ । प्रमुखमा एमालेले विद्यासुन्दर शाक्यलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने र उपप्रमुखमा राप्रपाका राजाराम श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा सर्वोत्तम डङ्गोल र उपप्रमुखमा सुशीला पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ । रासस